Nagu saabsan | Hangzhou Immuno Biotech
Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd.waa shirkad R&D ku saleysan oo ku taal Hangzhou. Immunobio waxaa si fiican loogu yaqaanaa naqshadeeyaha asalka ah iyo soo-saaraha borotiinka ee dib-u-soo-celinta aaladda baaritaanka fitamiinada. Immunobio sidoo kale waa soo saare xirfadle ah oo dhakhtar soo saare ah oo leh teknoolojiyad casri ah oo ku saabsan baaritaanka caafimaadka xoolaha iyo warshadaha baaritaanka caafimaadka aadanaha. Immunobio waxay leedahay wax kabadan 30 rukhsad ruqsad loo siiyay waaxda 'IVD' iyo in kabadan 20 oo dib loo eegay.
Si loola dagaallamo Cudurka faafa ee COVID-19, Immunobio wuxuu soo saaray taxane ah baaritaan baaritaan deg deg ah oo ku saabsan COVID-19. Horraantii Febraayo 2020, waxaan sii deynay baaritaanka 'Coronavirus COVID-19 IgG / IgM Antibody Rapid Test for IgG iyo IgM antibodies baaritaanka. Kadib bishii Sebtember, Immunobio wuxuu si guul leh u soo saaray SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) si loo taageero baaritaanka degdegga ah ee baaritaanka antigen. Bishii Diseembar 2020, sheeko cusub oo loo yaqaan 'SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test' (COVID-19 Ab) ayaa lagu soo saaray guul, si loo muujiyo heerka ilaalinta ee difaaca jirka ee dhiigga dadka.
Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd.waxay sameyneysaa wayna sii wadi doontaa sameynta cilmi baarista iyo horumarka hal abuurka baaritaanka caafimaadka ee IVD. Immunobio way ilaalin doontaa balanqaadkeena si aan u siino alaabooyin cusub oo tartan u leh adduun caafimaad qaba.
Immunobio waxay siineysaa dhammaan badeecadaha si adag ula socda nidaamka maaraynta tayada. Waxaan wadnaa nidaamka xakamaynta tayada ee ISO9001 iyo ISO13485 si loo hubiyo tayada wanaagsan ee alaabtayada, iyo waliba nidaamka Maareynta Hantida Maskaxda si loo ilaaliyo sifooyinka aqooneed ee macaamiisheenna iyo nafteenaba. Immunobio waxay siineysaa borotiinadiisa dib-u-soo-kicinta leh, sida borotiinka 'recombinant N', borotiinka S, borotiinka NS chimera ee SARS-CoV-2, si loo siiyo wada-hawlgalayaasha baaritaanka degdegga ah ee la ixtiraamo. Immunobio sidoo kale waxay siineysaa wada-hawlgalayaashayada caalamiga ah qaab aan kala go 'lahayn oo ah nus-shey. Immunobio waxay sidoo kale siineysaa tijaabooyin deg deg ah iyo adeegyo calaamadeysan oo OEM / adeegyo gaar loo leeyahay ah macaamiisheenna oo ka kala imanaya gees kasta oo adduunka ah.
Dadku waa aasaaska horumarka ganacsiga. La'aanta qof kasta oo ka mid ah shaqaalaheena, shirkadeennu way ku adkaan lahayd inay horumariso. Sidaa darteed, shaqo maalmeedka, shirkadeena sidoo kale waxay aad uga walaacsan tahay shaqada daryeelka shaqaalaha. Marka lagu daro bixinta shaqaalaha hadiyado daryeel oo khuseeya xilliyada ciidaha, waxaan sidoo kale abaabulnaa shaqaalaha safarka iyo cashada, si shaqaaluhu u nastaan ​​shaqada ka dib.